Umzi mveliso we-3.125G | I-China 3.125G Abavelisi, abaXhasi
3Gb / s SFP + CWDM 80km DDM Duplex LC transceiver ebonakalayo
Ii-transceivers ziyilo lweGigabit Ethernet, iFiber Channel, iSONET kunye nesicelo seATM. Imodyuli ye-transceiver iyangqinelana neSivumelwano se-SFP + seMithombo-soMthombo emininzi (MSA) kwaye iyahambelana nemfuno yeRoHS.
3Gb / s SFP + CWDM 40km DDM Duplex LC transceiver ebonakalayo
Inkcazo yemveliso I-10Gb / s SFP + CWDM uthotho lwe-transceiver ebonakalayo yenzelwe usetyenziso lonxibelelwano lwefayibha njenge-10G Ethernet, ehambelana ngokupheleleyo nenkcazo ye-SFP + MSA SFF-8431. Le modyuli yenzelwe ifayibha yendlela enye kwaye isebenza kubude bebude beCWDM. Imveliso yeMveliso yokuSasazwa kweNdlela enye yokuSasazwa kweSFP Iphakheji yemithombo emininzi ene-LC Receptacle ukuya kuthi ga kwi-10Gb / s Idatha yokuDibanisa ukuSebenzisa okuFumanekayo okuXhobileyo okukodwa + kwe-3.3V yokuNikezelwa kwaMandla okuThobela ...